I-GPS013D - I-OMG efihlekile ye-SPY Vehicle / Car Magnetic GPS Tracker - Izixazululo ze-OMG
OMGGPS013D I-Spy Hidden Car GPS Tracker esebenza ngokususelwa kunethiwekhi ekhona ye-GSM neziphuphutheki ze-GPS, ingathola futhi iqaphe noma yiziphi izinhloso ngokude nge-SMS, i-APP yeselula nesoftware yokulandela iwebhu! Yamukela ubuchwepheshe obuphambili kakhulu be-GPS, i-Google Map, i-Wi-Fi ne-LBS yokuma okubili. Ngaphandle kwalokho, ngozibuthe onamandla owakhelwe ngaphakathi, ingafakwa kalula futhi ngokuqinile emotweni, iloli nanoma iliphi ilitshe elinobuso bensimbi. Ngaphezu kwalokho, isekela i-3G GSM 850/900/1800 / 1900Mhz, ingasebenza ngokuphelele emhlabeni jikelele!
Umsebenzi we-gps car tracker
Ukusekela i-Singapore 3G ne-4G sim khadi
Ukulandelwa kwangempela kwesikhathi nohlelo lokusebenza (i-IOS ne-Android), ama-sms kanye neplatifomu yewebhu
Ukuqapha okukude (Spy - imakrofoni eyakhelwe ngaphakathi, vumela ingxoxo engemuva)
Ukubekwa kwesikhathi eside kwebhethri ye-2-3 Iviki
Phendula i-sms ngokuxhuma kwe-google kumakhalekhukhwini
I-geo-fence, I-alamu yomsindo, i-alamu yokuVibration
Imodi yokulondoloza amandla-yokulondoloza (izinhlobo ze-3 zemodi yokusebenza)
Yakha-Ku-5 Amagetsi Amandla
Indawo ye-WIFI (Okokuzithandela)
Susa i-Alarm (Ngedivayisi isusa emotweni, I-Alert izothunyelwa)
Landelela izimoto ezizimele / Ukuqashiswa kwemoto / Izinsiza ngaphandle kweminye
Imisebenzi Emqoka Yomkhiqizo:
GPS + LBS Izindlela Ezimbili Zokumiswa: Uma isiginali ye-gps ilungile, insiza izothola nge-satellite ye-gps, uma kungenjalo, idivaysi izothola nge-LBS! Ngaphansi kwemodi yokuthola i-GPS, ukunemba kungamamitha we-5-10, ngaphansi kwemodi yokuthola ye-LBS, ukunemba kungamamitha we-100-2000.
Ukulandela ngomkhondo wesikhathi esedlule: Uzokwazi ukulandelela ngqo uhlelo lokusebenza kumamephu we-google ngeselula, ithebhulethi nekhompyutha, kanti isikhathi sokulayisha idatha kungamasekhondi we-10.
Ukudlalwa komzila komlando: I-APP neseva yewebhu ingarekhoda idatha yokulayisha yedivayisi kuze kube izinyanga ze-6, uzokwazi ukudlala indlela yomlando nganoma yisiphi isikhathi.
Isikhathi Eside Sokulinda: Ibhethri elakhelwe ngaphakathi le-3.7V 20000 mAh / 10000mAh Li-ion, isikhathi sokulinda sesifikile kuzinsuku ze-240 / 120 futhi isikhathi sokusebenza siphezulu sezinsuku ze-20-30;
Onamandla Magnetic: Inakhelwe-ku-magnets enamandla, ingafakwa kalula.
I-IP67 engenawo amanziIzinga lokuvimbela amanzi kule divayisi yi-IP65, lingamelana namanzi angasebenzi kodwa lingafakwa ngaphansi kwamanzi.
Ukuqapha Ngezwi Okude: Thumela "Ukuqapha + Iphasiwedi" kudivayisi kuqala, khona-ke idivayisi izaphenduka Imodi yokuqapha, manje uma ushaya inombolo ye-SIM kudivayisi, izolanda ucingo lwakho ngokuzenzakalelayo futhi uzobheka izwi elizungeze ucingo!
I-Alamu eguquliwe: Le alamu isebenza kuphela ngaphansi kwemodi yokubeka okuqhubekayo.Uma ijubane leyunithi lidlula isivinini osimisile, lizothumela umlayezo "i-alamu esheshayo!" Kwinombolo yomqondisi njalo ngemizuzu ye-5.
I-Alarm Alarm: Ngemuva kokuthi wenze i-alamu yokusebenzisa i-shake, sicela ugcine i-tracker imisiwe imizuzu ye-5, khona-ke lo msebenzi uzoqala ukusebenza. Izothumela i-SMS "inzwa ye-alamu!" Kwinombolo yomqondisi lapho iyunithi ithuke.
I-Movement Alarm: Lapho amayunithi ezohlala engenamuntu endaweni yemizuzu ye-10, umsebenzisi angakwazi ukusetha i-alamu yokunyakaza ngalomyalo "hambisa + umgibeli", khona-ke uma kwenzeka ithuluzi lihambise i-500m lizothumela i-alamu ye-alamu "Hambisa i-Alarm + ne-latitude" ku inombolo egunyaziwe.
I-Geo-uthango: setha i-geofence ye-tracker ukukhawula ukuhamba kwayo ngaphakathi kwesifunda. Iyunithi lizothumela imininingwane ye-alamu ku-APP nakweseva yewebhu uma liphuma noma lingena kulesi sifunda.
Ilahle i-Alamu: kunenzwa yokulwa nokususwa kwe-induction ohlangothini lwasemuva lwedivayisi. Uma le sensor engeniswa yemboleko ingemboziwe futhi, insiza izothumela "Ukulahlekelwa kwama-alamu!" Kwinombolo yomqondisi nenombolo ye-SOS nge-SMS.
Support PC Ukulandela ipulatifomu kanye Isicelo Ukulandelela smartphone.
Isilinganiso: 120mm x 65mm x 50mm
Inethiwekhi: I-GSM / GPRS
Ibhulogi: 850 / 900 / 1800 / 1900Mhz
I-GPS chip: UBLOX
Ukuzwela kwe-GPS: -159dBm
Ukufaneleka kwe-GPS: 5m
Isikhathi Okokuqala Okokuqala
Isimo sephola 35-80s
Isimo esifudumele ama-35
Isimo esishisayo ama-1
Ijaja yesakhiwo: 110-220V okokufaka 5V okukhipha
ibhethri: I-3.7V 10000m Ah ye-i-ion ibhethri eguquguqukayo
Hlala ULINDILE: I-2 kumaviki angu-3
Isitoreji Temp -40 ° C kuya ku-85 ° C
Isikhathi sokusebenza -20 ° C kuya ku-55 ° C
Umswakama Ama-5% -95% angavumeli
I-OMGGPS13D - Magnetic GPS Car Tracker - isithombe-skrini sohlelo lokusebenza lweselula
I-OMGGPS13D - Magnetic GPS Car Tracker - I-Web-Base Portal (chofoza ku-Image ukubona isikrini esigcwele)
I-OMGGPS13D - Idemo ye-Magnetic GPS Car Tracker
Ukubuka okuphelele kwe-7611 Ukubuka kwe-1 Namuhla